Isidlo ... Ngoku iqhutywe kakhulu kangangokuba intloko iyajikeleza ... Ngoko kutheni ukutya okudlulileyo kunyaka kunye nangaphezulu, kwaye inani labantu abanobunzima obunzima alinciphi? Kubonakala kungaqhelekanga, ewe? Enyanisweni, oku kuqhelekileyo, kuba ukutya kunokunciphisa, kwaye umzimba wethu ukwesaba oku kunye nokugcina ii-calories ezingaphezulu. Ukutya akunciphisi amanqatha, banciphisa umlinganiselo wokukhuphela kwamanzi. Kodwa kukho indlela yokuphuma - kufuneka uguqule indlela yokutya. Gwema ukutya okuthosiweyo, ukutya okukhawulezileyo, ukutya okulula kunye nokutya okusemandleni, zama ukunciphisa ukusetyenziswa kwetyuwa uze unike iswekile. Nangona kunjalo, nakunoma kunjalo, akwanele ukuba unike imveliso eyingozi ekulahlekeni kwesisindo, kubalulekile ukwazi ukuba yeyiphi ukutya okunciphisa ubunzima kwaye kukunceda ugcine ifom. Kwiimveliso zondlo, iikhalori ezimbalwa, zinciphisa izinga le-cholesterol egazini kwaye zithuthukise umgangatho wesifo, kunye nokulwa nokunciphisa ubunzima - oku yiyo kanye into oyifunayo.
Musa ukunikela ubungqina obushushu! Akuyimfuneko ukuba uhlale kwi-Hananas enye kuphela ngenxa yokuba zizityebi kwi-bromelain, ezitshisa amafutha. Khumbula ukuba ukutya kwakho kufuneka kulungelelaniswe kwaye kuluhlu. Kukho imveliso eninzi eya kukunceda ulahlekelwe isisindo, ngoko unokukwazi ukuzenza lula ukutya okulungileyo.
Imifuno mininzi kakhulu iikhalori kunye ezininzi iivithamini, i-cellulose kunye nezinye izinto ezinomsebenzi ezixhamlayo ezijongene kakuhle nendlala kwaye zinakekelwa kakuhle ngomsebenzi omhle wesondlo sesisu. Yonke imifuno iluncedo, akukho mfuneko. Nangona kunjalo, kufuneka kuthathelwe ukuba ezinye zazo zineempembelelo ezivuthayo. Ezi mifuno ziquka i-asparagus, isipinashi, isaladi yekhabishi, i-artichokes, i-watercress, kunye namaqabunga e-dandelion kunye nama-dandelions. Bangakwazi ukususa i-slag kunye nokuphucula umsebenzi we-timemaker. Kwakhona iimveliso zokutya zucchini, i-mokopu yogurtsy. Iklabishi ngokuqhelekileyo ithatha indawo yokuqala, kuba kuzo zonke iifom zayo ziqukethe iikhalori ezimbalwa. Njalo unokutya kumash, i-karoti, i-peas, i-radish kunye ne-beet. Ukuze ugule le mifuno isidumbu sidinga amandla amaninzi, kwaye xa sidla amandla, silahlekelwa isisindo.
Kwiziqhamo, ezininzi iivithamini, ishukela zendalo kunye neziqhamo zeziqhamo. I-Citrus iqukethe i-acids ye-organic kunye namafutha abalulekileyo, asusa ama-slag kwaye akhuthaze ukugonya. Ngaphezu koko, i-pomelo, ii-oranges, i-tangerines kunye ne-grapefruit ziqinisa imfutho yomzimba, zinciphise izinga le-cholesterol kwaye zisuse i-toxins. Oku kunciphisa ukutya. Iipilisi ze-apple ziyaziwa ngokuba nomxholo we-pectin, owanelisa nenzalo, kwaye unciphise ukutya. Inanapple ngokuqhelekileyo isityalo esincinci. Ngokukodwa i-fat burning-burning substance isisityebi kwindawo engundoqo yesi siqhamo. Oku akusebenzi ekutya okusemandleni. Uphela nje isidlo esiphundu. Kwipapaya iqukethe i-papain eninzi, eyahlula iiprotheni ezinzima zezilwanyana kunye namafutha. I-Kiwi ingaba ngumncedi wakho othembekileyo ekulwa neekhilogram ezingaphezulu. Ngaba uke wambona ngokukhawuleza ukuba inyama ye-shish kebab iphosa xa ityunyiwe kwi-kiwi puree? Lo ngumzekelo ocacileyo kunye ocacileyo!
Ukusuka kwi-fucus kunye neklabishi yolwandle ngokuqhelekileyo akunakwenzeka ukuba ukhulule. Akunjalo nakubungenakudliwa kakhulu. Ziqukethe ezininzi i-polyunsaturated fatty acids, i-fibre, iivithamini, izinto ezincinci kunye nezikhulu. Kakade, akufuneki ukuba uthenge isaladi yeenduku ze-crab, i-mayonnaise nolwandle oludala. Oku akuyi kukukwenza. Yidla isaladi elula yolwandle ngaphambili ngaphandle kwezaziso ezongezelelweyo.
Iintlanzi zentlanzi yolwandle
Kule mveliso, awukwazi ukwesaba amanqatha. Kwintlanzi yiprotheyini eyenziwa lula, kunye nenani elikhulu lamathambo e-polyunsaturated acids anceda ukulwa nobunzima obukhulu. Ngokuqhelekileyo badla ityhuna, i-salum, i-sardines, i-mackerel kunye ne-herring. I-Lake trout nayo yinto exabisekileyo kakhulu. Kukulungele ukupheka ngenxa yesibini, okanye ukuyivumela. Ngokuqinisekileyo, wonke umntu uthanda iintlanzi eziloyiweyo, kodwa akukho nto yokusebenzisa!
Imveliso yobisi yobuninzi
Kwiimveliso zobisi ezimanzi ezingenamafutha amaninzi, iiprotheyini ezininzi, ezithintekayo kakuhle. Ukutya, i-cottage cheese, i-kefir, i-yoghurt iphelele. Oku akusebenzi kwieshizi. Khumbula ukuba ushizi uyityuwa, kwaye yinto yokunciphisa - utshaba lokuqala!
Iitrobhu kunye neziqholo
Iinqununu zikhawuleza i-metabolism emzimbeni. I-hot pepper, i-ginger, i-sinamon, i-horseradish, isardard, i-pepper emnyama kunye ne-chicory - iziqholo ezinciphisa izinga le-insulin egazini kwaye likhawuleze ukuveliswa kwamandla emzimbeni. Ngokukodwa kufuneka ukhulume ngeenzuzo ze-chicory. Ukuba esikhundleni sekhofi uzakusela i-chicory, emva kweentsuku ezilishumi uya kubona ukuba i-steels iyancipha, ukuvuvukala kulele, kwaye uxinzelelo luye lwahla. Ukuba ukutya kwakho kulungele ixesha elide kunye nekhosi, uya kuphawula ukuba uya kuphucula umzimba okanye, kwiimeko ezimbi kakhulu, akuyi kuba ngcono. Kufuneka uqaphele ukuba kulawo mazwe apho iziqholo zidumile, abantu abagciniweyo abanokuthi bangekho. Amacube, afanelekileyo njengemihlobiso, aphucule kakuhle impilo. UCilantro unciphisa ukutya, uphucula umsebenzi wesisu kwaye unomphumela wokutshatyalaliswa kwemithi kunye nokubuyisela. I-Mint iphucula ubuthongo, iyanciphisa intlungu kunye nomkhuhlane. I-Dill ithuthukisa ukugaya kwaye isusa amathumbu emathumbu. I-Tarhun igxotha iimbilini, iphucula umsebenzi wesibindi kunye nentso. I-anyanisi eluhlaza izisa umyalelo kwinqanaba leeshukela egazini, landisa ukhuseleko. I-Parsley iyanciphisa i-spasm. I-Celery ihlambulula izitya kwaye iyancipha ukuguga. Khumbula ukuba ukuluhlaza kufuneka kuhlale kukho etafileni lethu, kwaye kumanani amakhulu kakhulu! Yidla imifuno entsha ukuze anike zonke iivithamini!
Urhulumente ngumthombo wefiber. I-calories ayifumanekanga apha nhlobo, ayifumanekanga into emzimbeni, kodwa ivele ivule, oko kubangela ukuba umzimba usebenze ngeekhalori. Khumbula ukuba i-bran kufuneka imele iqhume, mhlawumbi lindele impembelelo echaseneyo (ukudityaniswa).
Ukuxhaphazwa kwemifuno kunye nohlaza
Ukuba ulungiselela ngokufanelekileyo ukunyanyiswa kwamagqabi, baya kuqala ukulwa namafutha ngokufanelekileyo. Abaninzi bezondlo bathi yonke imihla kufuneka uphuze iikomityi ezi-5 zetayi eluhlaza. I-Tea ihlambulula iinqwelo kunye nefuthe ledayuretic. Iingcingo akudingeki zithelelwe ngamanzi abilayo, kungcono ukuzincoma emanzini afudumele, ngoko banako ukugcina amavithamini ancedo ngakumbi kuwe.
Ngosizo lwale mveliso uza kuba nokufumana impilo kunye nokuzinza. Ngokwemvelo, inyama, amaqanda kunye nebhotile kufuneka kubekho ekudleni kwakho. Khumbula ukuba inyama kufuneka ibe yondlo (imvu, inkukhu, i-veal), kufuneka iphekwe kwisibini okanye kwi-oven. Ngaphezu koko, ekudleni kwakho kufuneka kube yimifuno yamaprotheni: iipayi, ii-soybean, iimbotyi kunye neembotyi. Nangona kunjalo, zama ukuzincipha, kuba zininzi zeekhalori.
Kwaye ekupheleni kwenkcazo ndifuna ukuthetha ukuba ukuba imveliso ingadliwa ikhusi, ungazikhanyeli oku! Khumbula ukuba phantse zonke iivithamini zilungele ukupheka. Ukuba udla ukutya okuphekiweyo, isibindi sakho siza kusebenza ngokukhawuleza, kwaye umzimba awuzukufumana zonke izinto eziyimfuneko. Njengomthetho, ngenxa yoko, abantu bahlakulela zonke iintlobo zezilwanyana kunye nezinye izinto ezingathandekiyo, okungekho mntu udibanisa kunye nokutya. Ngoko ke, yidla imifuno emitsha, iziqhamo kunye nemifuno. Ukutya zama ukupheka isibini - sinomnandi kwaye sibaluleke kakhulu kubalulekile! Shiya i-crusts kunye ne-fatty foods kwiimeko ezinqabileyo xa unako ukuzithoba ngokutya okuphezulu kweekhalori.
Kukho enye imfihlelo encinci - ungafaki ityuwa xa ulungiselela ukutya. Kungcono ukwenza oku kakade kwisidlo, uzama ngexesha elifanayo ukutya kwetyuwa ngezantsi. Ewe, ukusetyenziswa kwesi seniso kuya kuba lula, kodwa xa ubunzima bakho buqala ukuhamba kumfanekiso ofunwayo, awuyi kufuna ukusebenzisa ityuwa.
Ewe, oku akusiyo yonke uluhlu lweemveliso ezinokubakho kwi-dietary, inokwandiswa. Kodwa khumbula ukuba kungakhathaliseki ukuba zininzi iimveliso ezibandakanyiweyo, akuyi kuze kubekho indawo ye ketchup, isobho, iifatata kunye ne-mayonnaise. Le mveliso ayinakusetyenziswa nangabantu abancinci nabasempilweni, kungabhekiseli abo banomlingo obunzima.
Indlela yokukhetha ukutya okulungileyo ukuze ungalimazi umzobo
Ijusi yamagilebhisi: ukubunjwa, iipropati, ukuchasene
Iimfihlelo ezibalulekileyo zezinto ezintle
Ukutsalwa kweembotyi eziluhlaza ngamakhowe
Ukwakhiwa kweepikili ezinamatshini
Uphupha ntoni ngokukhulelwa?
USvetlana Loboda waqala ngeenkwenkwezi nge-gloss kunye nentombi yakhe
Indlela yokukhetha iincwadi kubantwana
Indlela yokubhiyozela uNyaka omtsha kubantwana abaseneminyaka engama-14: imidlalo enomdla kunye nemincintiswano
Ukulala okungapheli komntwana wakho
I-pizza eneempom, ipare kunye ne-gorgonzola
Ama-shades ama-fifty azure: i-summer-up-2016 ekhanyayo
Ixabiso leqhwa elixabisekileyo: izinto ezintsha ze-SOKOLOV iqoqo lebusika